မွမွသဲ နှင့် ရန်ကုန် Traffic | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » မွမွသဲ နှင့် ရန်ကုန် Traffic
မွမွသဲ နှင့် ရန်ကုန် Traffic
Posted by Foreign Resident on Sep 6, 2014 in Think Different | 35 comments
” မွမွသဲ နှင့် ရန်ကုန် Traffic “
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး ။
ရန်ကုန် ရဲ့ ရှယ် Connection ကို စိတ်ကုန်လို့ ၊ Post အသစ်မတင်ဘဲနေနေတာ ။
ဟို တစ်နေ့က ချစ်ရပါသော ရွာသူ မွသဲ သူ့ Face Book မှာတင်ထားတာလေး တွေ့လို့ ။
ဟဲ ဟဲ ၊ ဘယ် မွသဲ ရမှာလဲ ၊ အရမ်းခင်စရာ ကောင်းတဲ့ ၊ ပျော်တတ်တဲ့ ၊
တစ်တီတူး ငှက်များ အိပ်နေတုန်း မိုးပြိုမှာစိုးလို့ ၊ မိုးပေါ် ခြေထောက်ထောင်ပြီး အိပ်သလို ၊
ဒို့ မွမွသဲ ကတော့ တစ်မျိုး ( မိုးရော မြေ ပါ ပြိုမှာစိုးလို့ထင်ပါ့ ) ၊
အိပ်နေရင်းကနေ ၊ ရန်ကုန်မှာ မိုးကြီးကြီးရွာတိုင်း ၊ အိပ်ရာက ပြေးပြေးထပြီး ၊
တိုက်အောက်ပြေးဆင်း ၊ မြေကြီး ပြေးပြေးစမ်းတယ် ဆိုဘဲ ။
( မွသဲ နောက်တာနော် ၊ စိတ်မဆိုးပါနှင့် ဓါတ်ပုံလေးလဲ ယူသုံးပါရစေ )
အ ဟိ တကယ်က ၊ မိုးကြီးရင် တိုက်အောက်က ကား ရေနစ်မှာစိုးလို့ ၊
ကားကို ၊ မြေ နဲနဲ မြင့်တဲ့ ၊ လမ်းမကြီးပေါ်ပြေးပြေးရွှေ့နေရရှာတာပါ ။
အဲဒီလို ၊ ရေနစ်မှာစိုးလို့ လမ်းမကြီးပေါ်ပြေးရွှေ့လိုက်တဲ့ ကားကိုလဲ ၊
မရပ်ရလမ်းမို့လို့တဲ့ ၊ စည်ပင်က ကရိန်းကား နှင့် လာလာ ဆွဲသိမ်းပြန်သေး ဆိုဘဲ ။
အဲဒီ အခါကျတော့လဲ ၊ အခုနလေးတင် အပြင်ထုတ်ထားမိတဲ့ကားကို ၊
ဝင်းထဲကို ကမန်းကတန်း ပြန်ဆွဲသွင်းကြအုန်းပေါ့လေ ။
( ဒီလို ဖြစ်နေပုံနှင့်တော့ ၊ တော်ယုံလူ နှလုံးရောဂါ ရလောက်တယ် )
ဟီ ဟိ ၊ ငါတို့ တိုင်းပြည်ကြီးမှာ ဖြစ်နေတာတွေကလည်း ၊
တကယ့် ဟာသ ပြဇတ်ကြီးကို ကြည့်နေရလိုဘဲ ။
( စကားမစပ် မွသဲတော့ မိုးတွင်းကို သိပ်မုန်းမှာဘဲနော် )
ကဲပါ ၊ ဒါနှင့်ဘဲ လိုရင်း ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့် ။
အဲ ၊ ချစ်ရပါသော ရွာသူ မွသဲ က ” အိုက်လိုပိတ်နေဒါ တနေကုန် ” ဆိုပြီး ၊
သူ့တိုက်မြင့်ကြီးပေါ်ကနေ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ကားလမ်းပိတ်နေတာကို ရိုက်ပြထားတာပါ ။
” အခါတိုင်း မိနစ်နှစ်ဆယ် လမ်း ခုတနာရီ ကြာတယ် ” လို့ပါ ပြောလိုက်သေး ။
1 အိုက်လိုပိတ်နေဒါ တနေကုန် ( Credit to မွသဲ )
အဲဒီလို မွသဲ ရဲ့ အမြင့်ကနေ ကားလမ်းကို ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးကို ကြည့်ရင်း ၊
ကိုယ့်ရဲ့ အမြင့်ကနေ ရိုက်ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဓါတ်ပုံလေးတွေနှင့်ပါ ယှဉ်ကြည့်နေမိပါတယ် ။
ဒါက ၀၇-၀၅-၂၀၁၀ တုန်းက Sydney Tower ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ ။
ကားလမ်း ၂ လမ်း တွေ့နိုင်တယ် ။ ကား မရှုပ်ဖူး ရယ် ။
2 ၀၇-၀၅-၂၀၁၀ တုန်းက Sydney Tower ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ
ဒါက ၁၉-၀၁-၂၀၁၁ တုန်းက Singapore Flyer ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ ။
စင်္ကာပူ မြို့လယ်လို့ ပြောလို့ရမယ် ။ အဟင့် ၊ ကား မရှုပ်ဖူးနော် ။
3 ၁၉-၀၁-၂၀၁၁ တုန်းက Singapore Flyer ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ
ဒါက ၁၃-၀၉-၂၀၁၂ တုန်းက London Eye ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ ။
တကယ့် လန်ဒန် မြို့လယ် ။ တွေ့လား တံတားပေါ်မှာ ၊ ကားတွေ မရှုပ်ဖူးနော် ။
4 ၁၃-၀၉-၂၀၁၂ တုန်းက London Eye ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ
ဒါက ၁၆-၀၉-၂၀၁၂ တုန်းက Eiffel Tower ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ ။
တကယ့် ပဲရစ် မြို့လယ်ကောင်ပေါ့ ။ သူလဲ ရှုပ်ဖူးနော် ၊ တွေ့လား ။
5 ၁၆-၀၉-၂၀၁၂ တုန်းက Eiffel Tower ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ
ဒါကတော့ ၃၀-၀၉-၂၀၁၂ တုန်းက အီတလီ နိုင်ငံ Rome မြို့လယ်ကောင် ။
Spanish Steps နားပေါ့ ။ တစ်လမ်းမေါင်းလမ်းလေးပေါ့ ၊ ရှုပ်ဖူး ။
6 ၃၀-၀၉-၂၀၁၂ တုန်းက အီတလီ နိုင်ငံ Rome မြို့လယ်ကောင်
ဒါက ၀၅-၀၅-၂၀၁၄ တုန်းက Empire State Building ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ ။
နယူးရောက် မြို့လယ်ကောင်ပေါ့ ။ ညာဖက် အပေါ်လေးမှာ Liberty Statue ရယ် ။
ကားလမ်း ၃ လမ်း တွေ့နိုင်တယ် ။ ကား ရှုပ်ပုံ မပေါ်ပါဖူးကွယ် ။
7 ၀၅-၀၅-၂၀၁၄ တုန်းက Empire State Building ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ ။နယူးရောက် မြို့လယ်ကောင်ပေါ့
ဒါက ၀၈-၀၅-၂၀၁၄ တုန်းက ကမ္ဘာကျော် Viagra Fall ကို ( ဟီ ဟိ Typing Error ) ၊
ကနေဒါနိုင်ငံဘက်ခြမ်း Skylon Tower ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ ။
တကယ့် Tourist Attraction ပေါ့ ။ ကားက မရှုပ်တာမဟုတ်ဘူး ၊ ရှင်းကိုနေတာ ။
8 ၀၈-၀၅-၂၀၁၄ တုန်းက ကမ္ဘာကျော် Viagra Fall
ဒါက ၀၈-၀၅-၂၀၁၄ တုန်းက ကနေဒါနိုင်ငံ Toronto မြို့ ကို ၊
Canada News (CN) Tower ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ ။
သူလည်း ကားမရှုပ်ပါဘူးကွယ် ။
9 ၀၈-၀၅-၂၀၁၄ တုန်းက ကနေဒါနိုင်ငံ Toronto မြို့
ဒါက ၁၂-၀၅-၂၀၁၄ တုန်းက Las Vegas မြို့ ရဲ့ အဓိက Las Vegas Boulevard လမ်းမကြီးကို ၊
Las Vegas မြို့မှာ အမြင့်ဆုံး Stratosphere Tower ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာ ။
သူလည်း ကားသိပ်မရှုပ်လှပါဘူးကွယ် ။
10 ၁၂-၀၅-၂၀၁၄ တုန်းက Las Vegas မြို့ ရဲ့ အဓိက Las Vegas Boulevard လမ်းမကြီး
ဒါကတော့ ၁၄-၀၅-၂၀၁၄ တုန်းက San Francisco မြို့ ၊
မြို့တော် ခန်းမ ရှေ့ကလမ်းပေါ်မှာ ရိုက်ထားတာ ။
ညာဖက်အစွန်က အဆောက်အဦးကြီးက San Francisco မြို့တော် ခန်းမ ပေါ့ ။
ကားလမ်းပေါ်မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် သရဲခြောက်မှာတောင် စိုးရတယ် ။ ။
11 ၁၄-၀၅-၂၀၁၄ တုန်းက San Francisco မြို့ ၊ မြို့တော် ခန်းမ ရှေ့ကလမ်းပေါ်မှာ ရိုက်ထားတာ
ဓါတ်ပုံတွေ ကိုယ်နှိုက်က စကားပြောနေပါတယ်ကွယ် ။
အဘ ဘာမှ ထပ်ပြောဖို့တောင် သိပ် မလိုတော့ပါဘူး ။
အဘ ရဲ့ အတွေ့အကြုံ အရတော့ ၊
ရန်ကုန်မြို့ဟာ ကမ္ဘာ့ ကား အပိတ်ဆုံး ထိပ်တန်း မြို့တွေထဲ ပါနေလောက်ပါပြီ ။
( ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ နေ့တဓူဝ ခံနေရလို့လဲ ၊ ပိုခံစားမိနေသလား မပြောတတ် )
အ ဟင့် ၊ မြေအောက် ရထားလမ်း ၊ မိုးပျံ ရထားလမ်း တွေ ၊
မဖေါက်နိုင်လောက်အောင် ၊ ဆင်းရဲရှာတဲ့ ရန်ကုန် အစိုးရ ကိုလည်း ဘာမှ မပြောရက်ပါကွယ် ။
အင်းးးးးး ၊ အပြစ်တင်ချင်း တင်ရင် ၊ အမိမြေကို သံယောဇဉ် မပြတ်နိုင်ရှာတဲ့ ၊
အမိမြေကို မကြာခဏ ပြန်လာ ဒုက္ခ ခံနေမိတဲ့ ၊ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဘဲ အပြစ်တင်ချင်ပါတော့တယ် ။
( ဒါပေမယ့် အစိုးရမှာ ၊ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တဲ့ စေတနာ ရှိရင်တော့ ရလောက်ပါတယ် ။
အခု ရန်ကုန် ရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မြေဈေးနှင့်ဆိုရင် ၊ ရန်ကုန်မြို့ထဲက ၊
အစိုးရပိုင် အချက်အခြာကျတဲ့ မြေကွက် ၁၀ ကွက်လောက် ရောင်းထုတ်လိုက်ရင်ကို ၊
တစ်နေ့ကို နှစ်နာရီလောက် သွားလာရေး ဒုက္ခရောက်နေရရှာတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ၊
မြေအောက် ဒါမှမဟုတ် မိုးပျံ ရထား စံနစ်တစ်ခုလောက် ရလောက်ပါတယ် ။
စေတနာများ ရှိနေမယ် ဆိုရင် ၊ ပြောပါတယ်လေ )
မနေ့ ညနေက သင်္ဘော ကိုယ်စားလှယ် လုပ်နေတဲ့ ၊
သူငယ်ချင်း ကပ္ပတိန် တစ်ယောက်နှင့် တွေ့တော့ ၊
ပြောမိတဲ့စကားလေးကိုဘဲ သတိရနေမိတော့တယ် ။
” သူငယ်ချင်း တဲ့ ၊
ငရဲပြည် ဆိုတာ ၊ သေပြီးမှသာ ခံရတယ်လို့ မင်းထင်နေလား တဲ့ ။
ငရဲပြည် ဆိုတာ ၊ မြေအောက်မှာဘဲ ရှိတယ်လို့ မင်းထင်နေလား တဲ့ ။ “
အ ဟင့် ၊ အ ဟင့် ၊ ငိုပျဇေ ။
အင်းးးးး ၊ အကောင်းဘက်က လှည့်တွေးကြည့်ရင်တော့လည်း ၊
ဒုက္ခ သစ္စာ ကို ၊ နေ့တဓူဝ ၊ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း ပြပေးနေတဲ့ တိုင်းပြည်ဆိုတော့လဲ ၊
ပြည်သူတွေ အကျွတ် တရားရဖို့ ၊ တရားမြင်ဖို့ ပိုနီးတာပေါ့လေ ။
အင်းးးး ၊ သာဓု ပါဗျာ ၊ သာဓု ပါ ။
.ရန်ကုန် Traffic ဒုက္ခကတော့ နိစ္စဓူဝ ခံနေရတာ အမှန်ပါပဲ…ကိုရင်ဖေါပြောသလို…
.မြေအောက် ဒါမှမဟုတ် မိုးပျံ ရထား စံနစ်တစ်ခုလောက်ရှိရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ကောင်းသပေါ့
.ခုလိုမဖြစ်နိုင်သေးချိန်မှာ အဓိကက လူတွေစည်းကမ်းရှိဖို့ အထူးလိုအပ်ပါသဗျ…
.ခုတော့ ယာဉ်ကြောတစ်ခုခုကြောင့် ရပ်သွားတာနဲ့ ကိုယ့်လိန်းကကိုယ် တန်းမစီပဲ တစ်မိနစ်မဆိုင်း
.Traffic Police ကမလုံလောက်
.ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလူတွေနဲ့တော့…… :p:
.မေ့သွားလို့…နိုင်ငံတကာရဲ့ အမြင့်ကရိုက်တဲ့ဓါတ်သေလေးတွေကြည့်ရလို့ ကျေးဇူးပါနော
မြန်မာပြည်ရဲ့ ရထားပိုင်းကတော့ လတ်ရှိအခြေအနေအရ တိုးတက်ဖို့မမြင်သေးဘူး၊
အခြားတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ မြေအောက် မိုးပျံ မြေပေါ် ရထားစနစ်တွေက ကောင်းလွန်းလို့ သွားလာရေး အဆင်ပြေပြီ အချိန်ကုန်သက်သာ အဆင်ပြေပေ့မယ့် မြန်မာပြည်ရထားစနစ်က ဖြွုံဖိုးမှုမရှိလေတော့ အချိန်တောင်ပိုပေးရတယ်လေ။
အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးး ဒီလိုနဲ့ဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာသွားနေအုံးမယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။
သတင်းကောင်းလေး ထပ်ပေးရရင်ဖြင့် ……
ဂျီးတော်မွသဲတို့ရှေ့ကလမ်းဟာ နောက်တစ်လအတွင်း အလွန်ဆိုးဝါးစွာပိတ်ပါလိမ့်ဦးမယ်
ကွန်ကရစ် လမ်းအဖြစ်ခင်းဖို့ စတင်နေပြီဖြစ်လို့ပါ ။
၁ ။ နာမည်ကြီးကျောင်းရှေ့လား
၂။ ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်နေသလား
၄။ ရေကျော်ရေကြီးနေတဲ့ လမ်းလား
၅။ စူပါမားကက်နဲ့ လက်ကားဈေးကြီးများရှိနေသလား
အထက်ပါအချက်အလက်များကို စဉ်းစားစုံစမ်းပြီးမှသာ အချိန်ယူတွက်ချက်ပြီး
ကိုရင်ဆာေ၇…အခုလတ်တလော ရွှေပြည်သာအ၀င်မှာ ကွန်ကရစ်လမ်းကြောင့် ဒုက္ခတွေ့နေသဗျို့ :b:
အောင်မယ်လေး တလကပါ့မလား အူးဆာရယ်။ ကမ်းနားလမ်းတောင်ခြောက်လခင်းမင့်ဟာ
မန်းလေးက ဆိုင်ကယ် traffic တွေဘာတွေလည်း လာကြည့်ပါအုန်း
ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောဌာန ပေါ်က traffic တွေရောပဲ
လူဦးရေ နည်းတဲ့အထဲ တခြားနေရာတော့ မသိဘူး မန်းလေးမှာ ဆိုင်ကယ် accident ကလည်း လျှော့ပေးတယ် ။
” လူဦးရေ နည်းတဲ့အထဲ မန်းလေးမှာ ဆိုင်ကယ် accident ကလည်း လျှော့ပေးတယ် ”
သြဇီမှာ ကားမောင်းရဲတဲ့သူတွေ ရန်ကုန်မှာ ကားမမောင်းရဲဘူး ။
ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မှာ ကားမောင်းရဲတဲ့သူတွေတောင် မန္တလေးမှာ ကားမမောင်းရဲဘူး ။
မန္တလေး က ဆိုင်ကယ် သမားတွေက အသက် အပိုပါသလိုဘဲ မောင်းနေကြတာ ။
မန္တလေး က ဆိုင်ကယ် သမားတွေကို မြင်တိုင်း ၊
အိန္ဒိယ ပြည် က ကားသမားတွေကို သွားသတိရတယ် ။
အိန္ဒိယ ပြည် က ကားတွေ အားလုံး အပွန်း အပဲ့ အပိန် အချိုင့် တွေချည်းဘဲ ။
. ရန်ကုန်နဲ့ တခြား mega city တွေရဲ့ skyscraper တွေများပုံနဲ့ ယှဉ်ကြည့်တော့ ..နောက်လာမယ့် .ငါးနှစ်ကနေဆယ်နှစ်အတွင်း ..ရန်ကုန်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ပဏီတွေ ကောင်းစားမည် ထင်ကြောင်း … . နည်းပညာမြင့် ၀န်ထမ်းမရှိသေးသည့်အတွက်… ပြည်ပမှ ပညာရှင်အလုံးအရင်းစိမ့်ဝင်လာနိုင်ကြောင်း…
..စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အလွန်ကောင်းစားလာနို်င်ကြောင်း
တော်တော့်ကို လမ်းတွေ ကျပ်ပိတ်နေတယ် ။
မြို့ ထဲ တစ်ခါသွားရင်.. အရင်က တစ်နာရီခွဲ ကြာတဲ့ ခရီးက အခု…သုံးနာရီလောက်ကြာတယ် ။
ဟိုတောခုတ.်..ဒီတောင်ဖြို… ဟိုမြစ်ရောင်း..ဆိုတာတွေ အစီအစဉ်တကျ လုပ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့…
ဒီလမ်းတွေ ဒီအချိန်မှာ..ဒီလူဦးရေနဲ့ ကျပ်လာနိုင်တယ်လို့ .. ကြိုတွေးပြီး..မစီစဉ်ခဲ့တာကို..တော်တော် မကျေမနပ်ဖြစ်မိတယ် ။
.ဒါက လမ်းမကြီး တွေ ပေါ်က ကားပိတ်တာမျိုးပေါ့နော..
.ရန်ကုန်ရဲ့ ထရပ်ဖစ်ပြသနာကို ဖြေရှင်းလိုတဲ့စိတ်လဲ အမှန်တကယ်ရှိရင်…
.ဖြေရှင်းမှ ဖြစ်မယ်လို့လဲ သိတတ်တဲ့ အသိဥာဏ်ရှိရင်…
.အများပြည်သူအကျိုးကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရဲရဲရင့်ရင့် ဆောင်ရွက်လိုစိတ်လဲရှိရင်….
.လက်ရှိရန်ကုန်ဟာ ကား ငါးသိန်းလောက်အထိ လက်ခံနိုင်လောက်ပါတယ်..။
.နောက်ချဲ့မယ့် နေရာတွေနဲ့ဆိုရင် ကား တစ်သန်းလောက်အထိ သုံးနိုင်လောက်ပါတယ်။
.ကျုပ်တို့ဆီမှာ ကနဦး လိုအပ်တာက
.ပြသနာတွေရဲ့ အဖြေ မဟုတ်ဘူး
.ပြသနာ ဖြေရှင်းနည်းတွေ မဟုတ်ဘူး
.ပြသနာတွေကို တကယ်ဖြေရှင်းချင်စိတ်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ…. သာဖြစ်တယ်။
.ကျုပ်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ကား မစီးတော့ပါဘူး…
.တစ်လ ငါးသောင်းပေးရတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ ကျုပ်ကားကို သွားထိုးထားပြီး
.ခြေလျှင်လျှောက်တယ်၊ ဆိုက်ကားစီးတယ်၊ ဘတ်စကားစီးတယ်…
.မဖြစ်မနေဆိုရင်တော့ အင်မတန်စိတ်နာလို့ ရှောင်ထားတဲ့ တက္ကစီတွေကိုလဲ
.အဲဒါ အဆန်းမမှတ်နဲ့ …
.ကျုပ်နေတဲ့ လမ်းတိုလေးထဲမှာတင် ကျုပ်လိုလူတွေ အများကြီး…..
.တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ့်ကားကို စောင်ခြုံထားခဲ့ပြီး ဘတ်စကားထွက်စီးနေကြတာ…
သထိန်း တွေ ကိုယ်ပိုင်ကားမစီး ဘဲ အများပိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံး ရင် အဲ့တာ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံ ဆိုလား။
ညက်ချိ လည် အောင် လုပ်တာလား။
ဂယ်ကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲ နေပြီလား။
.အဲ့ဒါ အဘတို့ရဲ့ လူတန်းစားညှိနည်းပေါ့ မခင်လတ်ရဲ့ ….
.ဒို့ကလွဲရင် အကုန်လုံး မြောင်းထဲဆင်း … လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်…
” ကျုပ်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ကား မစီးတော့ပါဘူး…
တစ်လ ငါးသောင်းပေးရတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ ကျုပ်ကားကို သွားထိုးထားပြီး ”
ဟုတ်ပါ့ ။ ကျနော့် မိတ်ဆွေ တစ်ချို့လည်း ၊
သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကား တွေကို ၊ သူတို့ မစီးကြတော့ပါဘူး ။
သူတို့ ကိုယ်ပိုင်ကား နှင့် မောင်းထွက်ပြီး ပြန်လာရင် ၊
ကား Parking နေရာ ပြန်မရတော့လို့လေ ။
ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ တစ်ခန်းကို ကား Parking တစ်စီးစာ ထည့်မဆောက်ရင် ၊
ဘာ အဆောက်အအုံမှ ပေး မဆောက်သင့်တော့ဘူး ။
ဒါပေမယ့် ၊ လက်ရှိ မဲလိမ် မဲခိုးပြီး တက်လာတဲ့ ( စစ်တပ် ) အစိုးရ ကတော့ ၊
နဂိုကတည်းက ပြည်သူ့ ချဉ်ဖတ် ( စစ်တပ် ) အစိုးရ ဆိုတော့ ၊
ပြည်သူက မုန်းပြီးသား / လူကြိုက် နဲပြီးသား ( စစ်တပ် ) အစိုးရ ဆိုတော့ ၊
ပြည်သူက ထပ်ပြီး မုန်းမှာ / လူကြိုက် နဲမှာကို စိုးရိမ်ပြီး ၊
တကယ် လုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကိုကျရင် လုပ်ရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
( အဲ သူတို့ ဝါးရမယ့် ခွင်မျိုးဆိုရင်တော့လည်း ၊ ပြည်သူက ထပ်ပြီး မုန်းလဲ ၊
လုံးဝ ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ မျက်နှာပြောင်ကြီး နှင့် လုပ်ရဲပြန်ရော ၊ အံ့ပါ့ )
သဘောက.. ကားတစင်းလမ်းဘေးမှာ ရက်တွေအများကြှး ကျော်ချရပ်ထားခွင့်တော့ရှိတယ်ပေါ့…
ဒါကလည်း… ကျန်သူတွေအတွက်… သိပ်တော့မတရားး
အယ်လ်အေမှာ.. လမ်းတွေကို.. အပတ်တိုင်း… ဘရပ်ရ်ှကားကြီးတွေနဲ့.. ရေဆေးဘရပ်ရ်ှတိုက်..သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါတယ်..
အဲဒီမှာ.. ဥပမာ..။ တနင်္လာနေ့ မနက် ၆နာရီက…၁၂နာရီ မရပ်ရဆိုတာမျိုးရေးထားတယ်..
အဲဒီအချိန်မှာ.. ကားရှင်းထားပေးမှ..လမ်းဘေးကို.. သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်တာမို့ပါ…။
ရပ်ထားတဲ့ကားရှိရင်.. တစ်ကက်ပေးတယ်..။ တစ်ကက်တစောင်.. ၂၅ဒေါ်လှကနေ.. ၅၀အထိ…။
၁) ကားက..အများပြည်သူလမ်းဘေးမှာ.. ကျောက်ချရပ်ခွင့်မရှိ…။
၃) ဒဏ်ကြေးကနေ.. မြူနီစပယ်ဝင်ငွေရ..။ Towကားဆွဲသူတွေအလုပ်ရ…
သများ ယောက်ခမွ သဲလေး သနားပါတယ် ဟယ်။
နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ ပိုက်ဆံ ဆင်းရဲတာ အပြစ်မဟုတ်။
နိုင်ငံ နဲ့ ပြည်သူ အပေါ် စေတနာ ဆင်းရဲ ခြင်းသာ အပြစ်တင်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံ က သူကို စေတနာရှိတဲ့ အစိုးရနဲ့ မတန်သေးဘူး ထင်ပါတယ်။
” အစိုးရ ဟူသည် နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ ပိုက်ဆံ ဆင်းရဲတာ အပြစ်မဟုတ်။
နိုင်ငံ နဲ့ ပြည်သူ အပေါ် စေတနာ ဆင်းရဲ ခြင်းသာ အပြစ်တင်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ “
အီးးးးးးးငိုဗျဇီ :byee: လမ်းတင်ပိတ်တာလာူအဘရယ် ကွန်နက်ချင်လဲဆိုးလွန်းလို့ဒီပိုစ်မနေ့ကတနေကုန်ဝင်ဖတ်မရဘူးရယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာ ဂယ်ကိုပဲပြောပြောချင်ပေါင်
ဒါ့ထက်ဇဂါးမစပ်ဒီပို့ကလေး သဂျီးဒို့သတင်းစာမှာထည့်ပါလားဟင်။ ညန်မာချိုဒါ ဂဘာကျော်တွားအောင်
မန်းလေးနဲ့ ရန်ကုန် ယာဉ်မောင်းသူတွေ ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ခြင်းကွာပါတယ်။
(ဘယ်သူ မှန် တယ် မှား တယ်မပြောဘူး))
ရန်ကုန်မှာက အတော်များများ က သူ့ လမ်းအတိုင်းသူမောင်းတယ်။
မှားတဲ့ကောင်ခံ အားနာစရာ မျက်နှာထောက်စရာမလိုဘူး။
အရော်ပေးရင်ပေး မပေးရင် ရုံးတက်လိုက်ရုံဘဲ။
မန်းလေးမှာက မှန်တယ် မှား တယ် ဘယ်သူမှ မခံစားဘူး။
သူလဲလွတ်အောင်ကြည့် မောင်း ကိုယ်လဲ လွတ်အောင်ကြည့် မောင်း။
တိုက်မိတယ်ဆိုတာကလဲ တကယ်ကိုအရှိန်မထိန်းနိုင်လို့ ၀င်တိုက်တာ။
အမှားအမှန်လု ပြီး တမင် ၀င်တိုက်တယ်ဆို တာ မရှိဘူး။
အေး ဖြစ်ရင်လဲ အလျော် ရ ဘို့ သိပ်မစဉ်းစားနဲ့။
တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သိနေတဲ့ လူတွေ ထောက်ထားစရာလူတွေ
မျက်နှာ နာတဲ့ သူတွေ ဖြစ်နေလေတော့
ဟိုကောင်တွေတော့ ပေး မစား ဘူး ဆို တဲ့ စိတ်ရှိတော့ လူမသေ ရင် ရုံးတက်တယ်ဆိုတာမရှိသလောက်။
ရန်ကုန်နဲ့မန်းလိုက် ဒီလို ကွာတယ်လေ။
အဲ့လာ လေး လာပြော တာ ပါ ကိုဖော
.ရန်ကုန်ရဲ့ ကားပြသနာ လမ်းပြသနာ တနေ့ ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိလို့မဟုတ်…
.တမင်ကို ဒီလိုဖြစ်တဲ့အထိ ပေကပ်နေတာဖြစ်တယ်…
.၂၀၀၄ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ရန်ကုန်ကို လူလို စီမံခဲ့ရင်
.ဒါမျိုး လုံးဝ ဖြစ်စရာမရှိ…။
.အဲဒီတုန်းက ဘန်ကောက်ဥပမာလဲ မြင်ခဲ့ပြီးပြီ
.ဂျကာတာ ဥပမာလဲ မြင်ခဲ့ပြီးပြီ
.ကျုပ်တို့က မဖွံ့ဖြိုးလို့ ဆယ်နှစ်ကျော်အချိန်ရခဲ့တယ်….
.တိုင်းပြည်အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်တာတွေကို ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ခဲ့ကြဘူး…။
.အာဏာရှင်စံနစ်မှာ သုံးတတ်ရင် ကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်
.တစ်ခုခုကို အတင်းအကြပ်လုပ်ဖို့လိုလာရင် မြန်အောင်နဲ့ ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရတယ်…။
(တရုတ်ပြည် ကလေးတစ်ယောက်ပဲမွေးခိုင်းပြီး ဆင်းရဲတွင်းကထွက်လာတာကြည့်…)
ငိုဗျဇီဒေါ့ ဦးပါရယ်။ အစိုးရဆိုတဲ့ဟာကြီးက နည်းပေါင်းစုံနှိပ်စက်တာခံနေရတာ ခုတော့လဲ သုမဏကျောမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဆိုသလိုပါပဲ
ဒီတစ်ခါ အတည်မန့် ပါရစေ။
ဒီမှာလဲ လမ်းတွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပိတ်ပါတယ် အဘဖော ရယ်။
အချိန်တိုင်း တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
မနက် ၇နာရီ ခွဲ ကနေ ၈နာရီ၊ ညနေ ၃နာရီ ကနေ ၆နာရီ အဆိုးဆုံးပါ။
ကလေး ကျောင်း ပို့/ကြို အချိန် တွေမို့ ရှောင်လို့မရ၊ ရုံးသမား ဆို ရှောင်လို့ မရ။
ဒါပေမဲ့ ဒီမှာက တကယ်လို့ ကားကျပ်ရင်တောင် မှ စိတ်မရှည်နိုင်ရင် လမ်းအကြိုအကြား ရှာပြီး ကွေ့ပါတ် သွား လို့ ရတဲ့ အခြေအနေလဲ ရှိပါသေးတယ်။
တစ်ခါတစ်လေလဲ ဘာမှ လုပ်မရအောင် ညပ် ပါတယ်။
လမ်းပြင်တာတွေ က အလှည့်ကျရှိနေလို့ နေရာပြောင်းပြီး ကျပ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စောစော က ပြောတဲ့ အချိန်တွေ မှာပါဘဲ။
နေ့ခင်း ဆို အတော်ရှင်းပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဖိုး/အဖွား ကြီး တွေ ဆို နေ့လည် မှ အပြင်ထွက်ပါတယ်။
စနေ တနင်္ဂနွေ နဲ့ ကလေးတွေ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ မှာ ကားကျပ် သက်သာပါတယ်။
မြန်မာပြည် ကတော့ တစ်ချိန်လုံး ဘဲ လူတွေ အပြင်ထွက် နေတာလဲ ရှိ။ လမ်းတွေ ကလဲ အချိုးမကျ၊ ကားတွေကလဲ စည်းမရှိ၊ ဒါကိုလဲ ကောင်းကောင်း အရေးမယူ
မြို့ကလဲ မြို့ပုံမကျ တော့
ဒါတောင် နေပြည်တော် ကြီး ရှိနေလို့။
ဒါနဲ့များ ဒီလို အမျှော်အမြင် ကြီး သူ တွေ ကို အပြစ်မြင် ကြသေး။
ဒါကတော့.. မြန်မာပြည်လမ်းမှာ.. ၃လမ်းသွားဖြစ်လျှက်နဲ့.. လမ်းကြောင်းမျဉ်းမဆွဲထားတာပါ…။
လူဦးရေ၁၀သန်းလောက်မြို့တခုမှာ.. လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ကားအရေအတွက်နဲ့ဆိုရင်.. ( တခြားကမ္ဘာ့မြို့ကြီးတွေနဲ့ယှဉ်ရင်) ကား/လူ အချိုးအင်မတန်နည်းတာ.. သတိထားမိပါတယ်..
သဘောက.. ကားအစင်းရေဒီထက် (အနည်းဆုံး) ၃ဆ.. တိုးတက်သင့်တာပါ..။
အခုလို… ကားဂျမ်းတုပ်နေမှု့နဲ့တော့… မဖြစ်…။
၁) မြို့မြုနီစပယ်မှာ ငွေမရှိလို့
၄) ပရို( မြို့ပြလမ်းစနစ် ကျွမ်းကျင်သူ အင်ဂျင်နီယာ) မရှိလို့..
၁) လမ်းတိုင်း.. လမ်းအမှတ်အသား… မျဉ်းပိတ်ဖွင့်.. ပလက်ဖောင်းရပ်နားအမှတ်အသား…တွေထားရမယ်
၂) စည်းကမ်းဖောက်သူ( ယဉ်မောင်း..။ လမ်းဘောလမ်းလျှောက်နေသူ။ လမ်းဖြတ်သူ။ ဈေးရောင်းသူ..။ ကားရပ်သူ..။ လမ်းပိတ်သူ..) တဦးချင်းတွေကို.. အပြစ်ပေးမှတ်တမ်းထားနိုင်တဲ့.. Ticket စနစ်နဲ့အရေးယူရမယ်..
၃) မြန်မာပြည်မယ်.. လူ၂ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံရင်.. ဘယ်/ညာ ဘယ်လိုရှေင်ကြသလည်း..။ တောင်းပန်သလား..။ တန်းစီစနစ်မှာ ဦးစားပေးသူရှိသလား.. စသဖြင့်…။
၄) အင်ဂျင်နီယာကျောင်း(တက္ကသိုလ်)မှာ.. လမ်းအင်ဂျင်နီယာ..။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ..။ ရေဆိုးရေမြောင်းအင်ဂျင်နီယာစသဖြင့် အထူးပြုဘာသာရပ်ထား ပြန်သင့်ကြားသင့်ပါတယ်..။ ကြားထဲမတော့.. တိုးတက်ပြီးနိုင်ငံကြီးတွေဆီ ပညာတော်သင်သွားသင့်အကူအညီတောင်း.. သူတို့ဆီက..ပညာရှင်ကိုငွေပေးခေါ်ခန့်ခြင်းဖြင့်.. စသင့်တယ်.. ထင်..။
မှတ်ချက်။ ။ ယူအက်စ်မှာ.. လမ်းဘေးကကားတစင်း မိန်းလမ်းထဲဝင်ဖို့(ဖြတ်ထွက်ဖို့) ခေါင်းပြူလာရင်.. မိန်းလမ်းကြောကသွားနေသူတွေထဲ.. ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်.. နေရာပေးရပ်ပေးပြီး.. နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာ.. Respect ပေးခြင်းပြု.. လမ်းပေးပါတယ်..။
(ရန်ကုန်)ပုံအရ.. လမ်းပြောင်းပြန်ချလာတဲ့.. ဆိုက်ကားနဲ့တေ့နေတဲ့..ငွေရောင်ကားကလေးမှာ.. ဟိုမှာဖက်လမ်းကြောဖြတ်ထွက်ဖို့.. အခွင့်.. ရှိ/မရှိ.. မျှော်လင့်စရာရှိ/မရှိ… စဉ်းစားကြစေချင်..။
အိုက်ငွေရောင်ကားလေးလဲ ခေါင်းထိုးပြီးအတင်းဖြတ်လို့ ဟိုဖက်လမ်းကြောကို ဘေးကင်းက်င်းရောက်သွားတယ်သဂျီးရေ။
ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ အဖြေကို ကျနော်တောင် ခပ်ရေးရေး တွေးမိရဲ့
ဒီ အစိုးရ မှာ လိုနေတာက တစ်ခုတည်း ရယ်
ခုမှ သိလား ဂျားရယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအစိုးရဟာ ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ စေတနာမထားကြောင်း၊
ရက်စက်ကြောင်း၊ အရည်အချင်းမဲ့ကြောင်း စတာတွေကို အဖြစ်အပျက်မျိုးစုံကနေ သက်သေထုတ်သိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တကူးတက သက်သေပြစရာတွေမလိုလောက်အောင်ထင်ရှားပြီးမို့ ဒီအပိုင်းတွေကို ဖော်ထုတ်တင်ပြလိုစိတ်မရှိတော့ပါဘူး။
ဟိုလိုလုပ်သင့်တယ်၊ ဒီလိုလုပ်သင့်တယ်၊ တကယ်ဆိုဒီအတိုင်းဖြစ်ရမှာ ဆိုတာတွေကို ပြောချင်စိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။
လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ ပြောချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတဲ့ဟာတွေကို (ကိုယ်စား) နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရေးသားပြီး ဖော်ထုတ်တင်ပြရတာတွေလည်း မလုပ်ချင်တော့ဘူး။
တကယ်တမ်းစိတ်ကူးနေတာက ကျွန်တော်တို့ ဒီလူစု အုပ်ချုပ်ပုံနဲ့ ဘယ်လိုဆက်စခန်းသွားမလည်း၊
သူတို့ကိုပြည်သူတွေမကြိုက်မှန်းလည်းသိရဲ့သားနဲ့ ပေကပ်ပြီး ရပ်တည်နေတဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ အပေါင်းအပါတွေကိုဘယ်လိ်ုလုပ်ရမလည်း။
ဒီအစိုးရလုပ်ပုံ၊ ကိုင်ပုံ အဆီအငေါ်မတည့်တာတွေကို ထောက်ပြဝေဖန်ပြီး သရော်လှောင်ပြောင်နေရုံနဲ့ တင်းတိမ်နေရမှာလား။
လူမချိန်းရင်တောင် မူကိုချက်ချင်းချိန်းပြီး ပြည်သူလူထုယုံလောက်တဲ့လက်တွေ့လုပ်ပြရင် ချက်ချင်းထောက်ခံဝန်းရံဖို့အဆင်သင့်ပဲ။
ခင်ဗျားတို့ကို ပြည်သူတွေက အကြောင်းမဲ့သက်သက်မုန်းတီးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်အစိုးရအပေါ်မှာ မယုံကြည်တဲ့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာ ဘယ်လောက်သိမ်ငယ်ပြီး ထိခိုက်ကြေကွဲမလည်းဆိုတာ လက်တွေ့ပါပဲ။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်အစိုးရကိုအထင်သေး၊ အမြင်သေးဖြစ်နေရတာကိုလည်း ရပ်တန်းကရပ်ချင်ပြီ။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဟာ Gladiator ဇာတ်ကားထဲကအတိုင်ပါပဲ။
ကိုယ်နဲ့ပြိုင်မယ့်သူရဲကောင်းရဲ့ ရင်ဝကို ဓါးနဲ့ကြိုပြီး ထိုးထားတာပဲ မဟုတ်လား။
ကိုင်းပါဗျာ..ကျွန်တော်တို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ နှစ်ပေါင်း လေးဆယ်အတွင်း စေတနာမှန်မှန်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့တာရှိရင် တစ်ခုလောက်ပဲပြောပါ။
ကြံကြံဖန်ဖန်ချီးကျူးမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းမှန်သမျှကို ရှောင်ကွင်းပြီး ကောက်ကျစ်တဲ့နည်းလမ်းမှန်သမျှ သေသေချာချာသုံးသွားတဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။
အဲဒီတော့ ပြောမကုန်တဲ့ အစိုးရ တောက်တုံးမကျမှုတွေ မပြောတော့ဘူးးး
ပေးစရာရှိတဲ့ မဲကို ပေးသင့်တဲ့ လူပဲ ပေးတော့မယ်။
သူတို့ ကို လုံးဝ မဲ မပေးသင့်တာတော့ သေချာနေပြီလေ။
chance တစ်ခု အနေနဲ့ စောင့်ကြည့်ပေးလိုက်တာပါဗျာ…
Chance for them???
40 years plus4years are not enough??
Do they need some more time or
Do we still have strength to wait and see for them???
Until the end of Myanmar before the end of the world???
This time is not to wait and see..!!
It is time to know and decide what kind of government we should have in 2015. The result is in our hands..
မလုံလောက်ဘူး မပြောဝူး လေ
ဒီသက်တမ်းမှာ ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာ မြင်ခဲ့၊ သိခဲ့၊ ကြားခဲ့ပြီးပြီပဲ
ဟိုးး ခပ်ငယ်ငယ် ငချွတ်အရွယ်လည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး
လေးနှစ်အတွင်း မျက်စိလဲ ပွင့် နားလည်း စွင့် လာပါပြီ
နောက်ထပ် chance ထပ်ပေးမယ်လို့
ဘယ်သူ ပြော လဲ ?????
အခုထိ သူတို့ကိုပဲ အားထားနေတဲ့သူတွေ ရှိသေးတယ် ဆိုတာလည်း ဖြည့်ပြောချင်ရဲ့
အဲ့ အင်အားကလည်း လျှော့ တွက်လို့တော့ ရမယ် မထင်..
သူတို့ အမျိုးအဆွေတွေ အောက်ဆွဲတွေလားးး
ကားပိတ်ချက်နှင့် လမ်းပိတ်ချက်ကတော့ ကမ်းမှာတဲ့ ကုန်ဆိုသလိုပါပဲ။
ပြောပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လန်ထောင်းသလို ဖြစ်မှာစိုးလို့
လမ်းတွေလည်းလျှောက် ၀ိတ်တွေလည်းကျနဲ့ လူရုပ်တောင် သိပ်မပေါ်တော့ဘူး။
အိမ်ပြန်ရောက် စာလေးဘာလေး ဖတ်/ရေး လုပ်မလားလို့ စဉ်းစားပေမယ့်
ရေးရေးတောင်မပေါ် အိပ်ရာပေါ် စက်တော်ခေါ်ရတဲ့ရက်ပေါင်းတွေပါပဲ….
အဲ့ဒီကားတွေထဲ ယာဉ်လိုင်စင်မဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မဲ့တွေ ဘယ်လောက်ပါလဲမသိ… နောက်ဖက်လမ်းမှာ နံပတ်ပြားတွေချိန်းတတ်တာတွေ့လို့… ကားဝယ်တာနဲ့ အင်ရှူးရန့်စ်ပါအပြည့်ဆောင်ခိုင်း… ရဲမှတ်တမ်းရှိသူဆို ၂ဆတိုး…ကမ်ပနီတွေ ဒေဝါလီခံရလောက်တယ် :mrgreenn: ကျောင်းကြီးတွေ ကျောင်းကားပဲကြိုခိုင်း… ဘယ်နဲ့ လှိုင်သာယာက ကလေး တီတီစီလာပို့. လှိုင်ကလူက လသာ၂သွားပို့… ပရိုင်းဗိတ်ကျောင်းတွေလည်း ကျောင်းကားကောင်းကောင်းစီစဉ်ပေးပြီး ကျောင်းတွင်း ကားရပ်စရာရှိတဲ့နေရာအကျယ်အဝန်းရှိမှခွင့်ပြုတော့ပေါ့နော်.. ကန်ထရိုက်တိုက်တွေလည်း ပါကင်အတွက်ပါ စဉ်းစားသင့်ပြီ.. အရင် ဗဟိုစည်တိုက်တွေလို့ လေ